Moments Neshamwari 44
Chinhu chepakutanga, nemashiripiti maitiro, chinounzwa muchikwangwani nenzira nemaoko; kana zvakadaro, ndeapi fomu inogona kubudiswa uye inoitwa sei?
Izvo zvinogoneka kune iye uyo ane masimba anodiwa emirangariro uye psychic sangano kuti ape kuvapo kwemuviri nemashura mashiripiti kune chero fomu yaanoda; uye zvakadaro, zvinogona kuve zvakachipa pakupedzisira kuti atore chinhu icho sevamwe vanhu vanowana izvo zvinhu zvechido chavo. Namaoko seari matrix chero zvicherwa zvicherwa kana geometrical fomu inogona kurongedzwa kubva pachinhu chechinhu. Saizvozvo zvinogona kuitisa zvinhu nemaoko anodzvanywa pamwe chete nekuumbwa mu fomu yakasimba.
Masimba emweya uye epfungwa anodiwa mune iye angapa chimiro chechisimba kune chisingaonekwe zvinhu ndeichi: kutenda, kuda, uye kufungidzira. Uye zvakare, iye muviri wake weastral unofanirwa kukwanisa kuramba uye kuburitsa mizhinji yemagineti. Wese munhu ane kutenda, kuda, uye kufungidzira; asi, mune n'anga, idzi dzinofanira kumutswa kune simba rakakwirira. Hapana basa rinoitwa pasina kutenda. Kune iro basa ririmo, n'anga yedu inofanira kuve nekutenda, uye irwo ruzivo mukuita. Kutenda uku kunogona kunge kusiri kwemabasa nemabasa ake muhupenyu hwazvino. Wedu wemashiripiti anofanira kuve nekutenda mukukwanisa kwake kuunza izvo zvisingaonekwe, kuita kuti zviwonekwe zvinonzwika, kugadzira izvo zvisingaonekwe, kuburitsa kuzvinhu izvo izvo zvavasingakwanisi kunzwisisa. Kana asina kutenda kuti zvinhu izvi zvinogona kuitwa, kana asina kutenda kuti anogona kuzviita, saka - haagoni. Kana achitenda kuti anogona kuita mashiripiti nekuti mumwe munhu anomuudza kuti anogona, kutenda kwake hakusi kutenda. Icho chinoramba chiri kutenda, pfungwa. Kuti ubudirire pabasa rake kutenda kwake kunofanira kukura mukati make, uye kusavezwa nechinhu chero chipi zvacho chingataurwa. Iko kutenda uko kunobva kumusoro kunobva paruzivo rwakakanganikwa, rwakawanikwa munguva yakapfuura. Haafanire kuramba achigutsikana nekutenda kusingazungunuke, asi anofanira kuunza zvakapfuura muzivo iripo. Anofanira kushandisa pfungwa dzake. Kana achida kushandisa pfungwa dzake nepfungwa, kutenda kwake kuchamutungamira mumabasa ake epfungwa uye zvichamupa nzira yekare kuti ave ruzivo iripo.
Nezvekufungidzira, n’anga yedu inofanira kunge yakasiyana nevaya vanonzi vanhu vekufungidzira, nekuti vane ndege dzakamira. Kufungidzira ndiko kugadzirwa kwemifananidzo, kana iyo mamiriro ayo mifananidzo inogadzirwa. Mifananidzo inogadzirwa nen'anga yedu mifananidzo yemupfungwa uye iyo, kana yagadzirwa, haina kutyorwa nyore sezvakaita ivhu kana zvimwewo zvinhu zvepanyama. Mifananidzo yen'anga yedu yakanyanya kuoma kugadzira uye kutyora uye ichagara kwenguva refu kupfuura iya yakagadzirwa nemarble kana simbi. Kuti ave nekufungidzira kwakakodzera pabasa rake, n'anga yedu inofanira kugadzirisa pfungwa yake pane iyo yaaizopa chimiro chemuviri. Anofanira kuita mufananidzo wayo. Izvi anozviita nekuchengeta pfungwa yake iri fomu kusvikira kwaari mufananidzo, uyo waanogona kushevedza zvakare nekufunga. Kana aine kutenda uye achigadzira mifananidzo mukuda, iye anowanawo. Kureva kuti, anokwanisa kudaidzira kuti abatsire pabasa rake. Kuda kuri kwese kwese uye semagetsi unogara wakagadzirira kukweretesa simba rawo kuna ani naani anopa munda uyu mashandiro ake uye anogona kuuita kuti ubate munda.
Kufambisa kwese kwekushambira kunogona kutsanangurwa nekujeka kwemasvomhu; zvakadaro, kana mumwe munhu ari mumvura akaedza kutevera nzira asi asina kutenda mukukwanisa kwake kushambira uye asingafungidzire achishambira paari kuita mafambiro, haadi kushambira. Kusava nechokwadi uye kutya kumubata, uye anonyura. Mukuedza kufamba tambo yakasimba, munhu asina kutenda kuti anogona kuifamba uye haazvifungidzire ari patambo uye achifamba tambo ichida kudonha, uye anodaro. Kuziva pamwe nemitemo yekudonha uye fizikisi haizomuchengete patambo iyoyo. Kutenda kunomuratidza kuti sei. Fungidziro inomuchengeta patambo. Will inomupa simba rekufamba. Chero bedzi achizvifungidzira patambo uye kuvimba kwake kuchiramba, haagoni kudonha. Asi kana pfungwa yake ikachinja, uye kana iye kana chidimbu chechipiri akazvifungidzira achiwa, iyo pikicha yaanoita yekudonha yake haigoni kumuona uye kumudhonza.
Akashongedzwa nekutenda, kuda, uye kufungidzira, munhu anogona kuburitsa kuburikidza nemaoko ake mumuviri zviitiko nekuita mashiripiti. Kuenzanisira: Kupa kuoneka kwemuviri kuti uite fomu, fomu racho rinofanira kunge rakabatwa kana kufungidzirwa. Iyo mvura inoyerera ichiratidzika, isingaoneki, inofanira kubatirwa compact kudzamara yagadziriswa uye mupfungwa yakasimba. Iri ibasa rekufungidzira. Mapasita anogona ikozvino kugadzirwa nemaoko anotenderedza uye nezvechimiro chaunoda. Nekufamba kwemaoko akatenderedza fomu, chinhu chechinhu chinokweverwa uye kunyorwa muchimiro icho uye, zvishoma nezvishoma, nekuenderera mberi kwemhepo, fomu rinova rinooneka uye riri remuviri. Izvi zvinoitwa nesimba rekutenda, izvo zvinoita kuti mitemo inodzora chinhu chechinhu chizivikanwe uye maitiro ekukwevera muiri ese basa rinozadziswa. Iyo pfungwa ndiyo inotungamira iyo inoita kuti kuda kusanganisa kana kusanganisa chinhu chechimiro uye kuunza icho muchimiro. Kana iyo pfungwa ikatenderera mukushanda, basa rinomira. Kana iyo funganyo yakatsiga, basa rekufungidzira uye nekutenda rinopedzwa nerudo. Iyo fomu inogadzirwa mumuviri, uye ndeye saizi uye mavara anodikanwa. Chinhu chidiki, chakaita kunge dombo kana kristalo kana gem, chinogona kuumbwa nekuisa ruoko rwerudyi pamusoro kuruboshwe, pakati penzvimbo dzematanda dzakatarisana. Ipapo ibwe kana gem kana kristaro rinofanira kufungidzirwa uye mufananidzo uyo unofanirwa kubatwa mukufunga uye kuputika kwawo kuchida. Iwo magineti emaoko emushandi ndiyo ivhu iro mukati memufananidzo wekristaro kana gem, sejemusi kana mhodzi, inotanga kukura. Nesimba remagineti pakati pemawoko, ray kana mawarandi echiedza anogadzirwa kuti apinde matrix mupfungwa, kudzamara gem yehukuru hwaidiwa uye ruvara uye luster yagadzirwa. Mafomu anga aripo uye anogona kugadzirwa nemashiripiti mashandiro, asi zviri nyore kutenga mafomu anodiwa nenzira dzakajairwa pane kuenda nenzira yekudzidziswa inodiwa kuti uvaite nenzira dzemashiripiti. Asi zvakanaka kuti murume ave nekutenda, mukudziridza kufunga kwake, kuti adzidze mashandisiro echido. Iko kukura kana kuwanikwa kweaya matatu masimba emashiripiti kuchaita murume kwaari. Ipapo anogona, asi hazvigoneka kuti achaita, kugadzira matombo anokosha kana mamwe mafomu nenzira dzemashiripiti.
Maoko aifanira kushandiswa sei mukuporesa muviri wako pachako kana kuti chikamu chemuviri?
Mirayiridzo haigone kupihwa iyo ingave yakakodzera kune ese marudzi ezvirwere, asi mirayiridzo inogona kupihwa mukubatsira mukurapa kwezvirwere zvezvirwere nezvirwere zvemuno, uye zvinogona kushanda kune vamwe vakawanda. Zvakanakira avo vanopora kuti vanzwisise zvishoma zvakakosha pamusoro pomuviri pamwe nemasikirwo azvo, vasati vamboedza kurapwa kwemagineti, yemiviri yavo kana yevamwe.
Muviri wenyama chiitiko chakawandisa chakarongedzwa zvinoenderana nemimwe mitemo, chimwe nechimwe chikamu kuita mamwe mabasa uye kushandira zvimwe zvinangwa, nekuda kwehukama hwevanhu vese. Iyo misa yemuviri inobatirwa pamwe chete, inogadziriswa uye inochengetedzwa, neyakagwinya remagineti remuviri mukati mehukuru. Mabasa echisikigo emuviri wemuviri, sekukwezva, kuchera, kusimudzira, kubvisa, uye zvese zvinofamba zvega zvoga, zvinotakurwa nemagineti yemuviri fomu mukati mehukuru hwemuviri. Mimwe mitemo inotonga mabasa ese emuviri. Kana iyi mirawo ikatyorwa, hutano hwemuviri hunotevedzera pasina chikonzero. Izvi zvakaipa ufakazi hwekuti zvimwe zvakaipa zvakaitwa, uye kuti pane chimwe chipinganidzo kana kuti pane zvakawanda zvinodzivirira mumuviri zvinodzivirira huturu kuunza hukama hwenhengo dzayo kana mabasa, kana kuti kune kudhurirwa kukuru. yesimba kupfuura izvo zviwanikwa zvinogona kugovera. Iyo yemagineti fomu muviri bateri yekuchengetedza kuburikidza neiyo hupenyu hwese hunoita. Simba remagineti ndiro svikiro rinobatanidza hupenyu hwese nezvinhu zvepanyama. Pasina simba remagineti, huwandu hwenyama huchadonha hwava guruva.
Mukurapa kwezvirwere uchishandisa maoko, ruoko rwerudyi rwakaiswa pahuma uye ruoko rweruboshwe kumashure kwemusoro. Mushure mekugara imomo chinyararire kwemaminitsi mashoma, ruoko rwerudyi runofanira kuiswa pachipfuva uye ruoko rweruboshwe rwakanangana nechepazamu. Mune maminetsi mashoma ruoko rworuboshwe runofanira kuiswa mudiki rekushure uye muchanza che ruoko rwerudyi pane navel. Muminiti kana maviri ruoko rwerudyi runofanira kufambiswa zvishoma nezvishoma uye zvakaperera padhuze nepadumbu pese-ipapo munzira iyo wachi icharwadziwa — kane makumi mana nepfumbamwe uye ipapo inounzwa kunzvimbo yayo yekutanga uye inobvumirwa kuramba yakadaro maminetsi. Ruoko rweruboshwe runofanira kuchengetwa ruchimira, nechanza pasi pepazasi, panguva dzekufamba kweruoko rwerudyi. Muviri unofanirwa kunge uri munzvimbo yekumberi.
Nezve chero kurapwa kwenzvimbo, ruoko rworuboshwe runofanira kuiswa pasi pechikamu chakakanganisika uye ruoko rwerudyi kune rumwe rutivi pamusoro pechikamu uye ipapo rakabvumirwa kuramba rinenge maminetsi mashanu kana kusvika nguva yakadai apo imwe inonzwa sezvairi kuti inguva yekumira . Kurapa kwemunharaunda kunofanirwa kutungamirwa kana kuteedzerwa nekurapa kwakazara kurondedzerwa. Iyo mitezo yemuviri inogona kusukwa, asi kusvetwa kunofanira kunge kuri nyoro. Kurapa kwehasha kunowanzo kukuvadza zvichienderana nenzira idzi.
Maoko enyama haaburitse kurapa; fomu yemagineti mukati memawoko haiburitse kurapa. Iko kurapa kunogadzirwa nehupenyu hwese, kunoitwa kumagineti fomu mukati memuviri wemuviri kuburikidza nemaoko. Chinhu chekuisa maoko pamusoro pemuviri ndechekufambisa hupenyu hwepasi rose kune fomu yemagineti uye kusimbisa iyo fomu yemagineti kuti igone kugamuchira uye kuchengeta uye kuwirirana zvakananga nehupenyu hwepasirese. Mukurapa muviri wega kana muviri weumwe, zvinofanirwa kunyatsonzwisiswa kuti pfungwa hadziite kurapwa, uye kuti pfungwa hadziedze kutungamira ikozvino kana kuvhiringidza kuyerera kwayo chero nenzira. Kana munhu asingakwanise kuchengeta pfungwa dzake dzakadzikama uye dzichidzikisira, kuti arege kupindira nekurapa, zviri nani kusatevedzera zvinoitwa pano. Kuedza kwepfungwa kutungamira izvozvi zvekupora kunokuvadza kune chikamu chikuru chemuviri kugutsa chikamu chidiki. Asi muchokwadi zvikamu zvese zvakakanganiswa nekukwevera. Izvi hazvisi pfungwa kana kurapa kwepfungwa. Uku kurapa kwemagineti sekutsanangurwa kunozosimudzira muviri wemagineti kuvandudza chiito uye hupenyu hwepasirese huchazadzikisa. Kuti ubate mushonga uye uchengetedze muviri zvakanaka, muviri unofanirwa kupihwa izvo zvekudya izvo zvinowona kuti zvinoda kugadzirisa nekuchengetedza chimiro chayo, uye zvese zvinosvibisa kana marara mumuviri zvinofanirwa kumiswa.